DEG DEG-Qarax Goor Dhoweyd Laga Maqlay Magaalada Boosaaso – Radio Daljir
Agoosto 8, 2017 8:01 g 2
War deg deg ah oo hadda naga soo gaarey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax laga maqlay bartamaha magaaladaasi, inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah u caddayn kadha halka uu ka dhacay iyo sida uu u dhacay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in jugta qarax la maqlay uu ahaa kaydka haamaha dabka laga dhaliyo oo qarxay iyo shidaal isbeegsaday.
Wararku waxay sheegayaan in qaraxaasi oo laga maqlay magaalada qaarkeed uu kadhacay inta u dhexaysa Baana-raama iyo Xalwo Kismaayo, waxaana xigey rasaas goos goos ah oo laga maqlay agagaarkaasi sida ay Daljir u sheegeen dad aaga ku sugan.
Xaaladda ammaan ee Boosaaso ayaa soo hagaagaysay todobaaddadii ugu dambeeyey iyadoona ciidanka ammaanku ay ku guulaysteen adkaynta ammaanka iyo qabqabashada dhagar qabayaasha.
Dr Maxamed Jaamac oo ku geeriyooday Talyaaniga(dhegayso)
axmad maxamd mire 7151608 4 years ago
ha wan wada maqlayny walnut leenahy cidamada howbaa laidiin idmady ee hawshiiina sifiicn. uguta
Abdikafi Ahmed Abdi ( 0907763711 ) 4 years ago
Assalaamu Calaykum , Radio Daljir
Qaraxa ka dhacay Magaalada Bosaaso ee dhawaaqiisu xooganaa Waa qarax kamid kuwa dhagaha dadka maxasta ah ee Dagan magaalada u roonayn , marka waxaan leeyahay ciidamada amaanka ” Nin lagu seexdow haseexan , xilbaa sidaa ha seexan ”